आज बिहीबार,बिहीबारको दिनमा श्रीकेदारनाथ मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर आज पौष २६ गते बिहिबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।” #जय_श्रीकेदारनाथ !! – सुदूरखबर डटकम
आज बिहीबार,बिहीबारको दिनमा श्रीकेदारनाथ मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर आज पौष २६ गते बिहिबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।” #जय_श्रीकेदारनाथ !!
श्रीसूर्य दक्षिणायन,हेमन्तर्तुः,विरोधकृत् नाम संवत्सर,श्रीशाके १९४०,विक्रमसम्वत २०७५ साल पुष २६ गते विहिबार नेपाल सम्बत ११३९ पोहेलाथ्व तदनुसार सन् २०१९ जनवरी १० तारिक शुक्लपक्ष चौथी तिथि अपरान्ह २ वजेर २१ मिनेटसम्म उप्रान्त पञ्चमी तिथि,शतभिषा नक्षत्र राती ३ वजेर २३ मिनेटसम्म उप्रान्त पूर्वभाद्रा नक्षत्र, व्याघातयोग, भद्राकरण,आनन्दादियोग वज्र,सूर्य धनु राशीमा,चन्द्रमा कुम्भ राशीमा । योगिनी नैऋत्य,चन्द्रमा पश्चिम,काल दक्षिण र पाश उत्तर दिशामा रहनेछ । शुभ कार्यमा यीनको विचार गरेर काम गर्नु राम्रो हुन्छ ।
राहुकालः–अशुभ अपरान्ह १ वजेर ३० मिनेटबाट २ वजेर ४८ मिनेटसम्म रहनेछ । अशुभ यमघण्टायोगः–विहान ६ वजेर ५७ मिनेटबाट ८ वजेर १६ मिनेटसम्म रहनेछ । गुली कालः–सामान्य विहान ९ वजेर ३४ मिनेटबाट १०वजेर ५३ मिनेटसम्म रहनेछ । दूरमुहूर्तः–अशुभ विहान १० वजेर २७ मिनेटबाट ११ वजेर ८ मिनेटसम्म र अपरान्ह २ वजेर ३८ मिनेटबाट ३ वजेर २० मिनेटसम्म रहनेछ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११ वजेर ५० मिनेटबाट मध्यान्ह १२ वजेर ३२ मिनेटसम्म रहनेछ ।
सूर्योदयबाट प्रातः ८ वजेर १६ मिनेटसम्म शुभ वेला,८ वजेर १६ मिनेटबाट ९ वजेर ३४ मिनेटसम्म रोग वेला,९ वजेर ३४ मिनेटबाट १० वजेर ५३ मिनेटसम्म उद्वेग वेला,१० वजेर ५३ मिनेटबाट १२ वजेर ११ मिनेटसम्म चर वेला, १२ वजेर ११ मिनेटबाट १ वजेर २९ मिनेटसम्म लाभ वेला,१ वजेर २९ मिनेटबाट २ वजेर ४८ मिनेटसम्म अमृत वेला,२ वजेर ४८ मिनेटबाट ४ वजेर ६ मिनेटसम्म काल वेला र ४ वजेर ६ मिनेटबाट सूर्यास्तसम्म शुभ वेला रहनेछ ।
सूर्यास्तबाट ७ वजेर ७ मिनेटसम्म अमृत वेला,७ वजेर ७ मिनेटबाट ८ वजेर ४९ मिनेटसम्म चर वेला,८ वजेर ४९ मिनेटबाट १० वजेर ३० मिनेटसम्म रोग वेला,१० वजेर ३० मिनेटबाट १२ वजेर १२ मिनेटसम्म काल वेला,१२ वजेर १२ मिनेटबाट १ वजेर ५४ मिनेटसम्म लाभ वेला,१ वजेर ५४ मिनेटबाट ३ वजेर ३५ मिनेटसम्म उद्वेग वेला,३ वजेर ३५ मिनेटबाट ५ वजेर १७ मिनेटसम्म शुभ र ५ वजेर १७ मिनेटबाट सूर्योदयसम्म अमृत वेला रहनेछ ।
मेषः–आकस्मिक आम्दानीको योग देखिन्छ । प्रयत्न गरेमा बक्यौता रकम उठ्नेछ । उद्योग,पराक्रम बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट सोचे भन्दा राम्रो आम्दानी हुनेछ । आफन्तजनबाट सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । समयको सदुपयोग गर्नु होला । धन लगानी नगर्नु होला । गोपनियता भङ्ग नगर्नु होला ।
वृषः– काममा देखिएका समस्या कम भएर जानेछन् । पठन पाठनमा प्रगति हुनेछ । कुरा काट्नेहरु सहयोग गर्न अग्रसर हुनेछन् । सामाजिक काममा अभिरुची बढ्नेछ । गएका ठाँउमा इज्जत प्रतिष्ठा,मान सम्मान मिल्नेछ । पराक्रम बढ्नेछ । लोभ मोह बढ्नेछ । भौतिक सुख सुविधामा वृद्धि हुनेछ ।
मिथुनः– समयमा सामान्य सुधार आउनेछ । आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा सामान्य प्रगति हुनेछ । फलदायी यात्राको सम्भावना देखिन्छ । नोकरी तथा राजनीतिबाट सन्तुष्टि कम मिल्नेछ । बाह्य काममा ध्यान केन्द्रित हुदा उपलब्धिका काम ओझेल पर्ने छन् ।
कर्कटः–काम गर्ने वातावरण विग्रिएर जानेछ । आफन्तका क्रियाकलापले मनमा चिसो पस्ने काम हुन सक्छ । अन्तिम चरणमा पुगेका काम रोकिने छन् । भाग्यले कम साथ दिनेछ । अनावस्यक खर्च बढ्ने छ । व्यापार व्यवसायमा गरेको लगानी डुब्न सक्छ । आर्थिक कारोवारमा विशेष चनाखो रहनु होला ।
सिंहः– विवादित कामको टुङ्गो लाग्नेछ । मुद्धामा जीत हुनेछ । आफन्तबाट सहयोग मिल्नेछ । प्रयत्न गर्नु भयो भने नयाँ काम हात पार्न सकिनेछ । आयत निर्यात व्यापार व्यवसायबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । विदेश यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । रजोगुण बढ्नेछ । दामपत्य जीवनमा सुखानुभूति हुनेछ ।
कन्याः– कडा मेहनत गर्नु पर्ला । सामान्य खटाईबाट काम बन्ने देखिदैन । प्रतिश्पर्धा गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । मेहनतपूर्वक गरेका काम सफल हुनेछन् । विरोधीसँगको लडाईमा विजय प्राप्त होला । श्रमको मुल्य लिन ठुलै कसरत गर्नु पर्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ ।
तुलाः– अस्थिरताले अनिष्ट निम्त्याउने हुदा मनलाई नियन्त्रण गरेर काममा लाग्नु होला । मनोविकार त्यागेर अगाडि बढ्नु होला । घरका समस्याबाट पूर्ण मुक्ति मिल्ने छैन । घर बाहिर बसेर काम गर्दा बढि आनन्द मिल्नेछ । पढाई लेखाईमा थोरै ध्यान जानेछ । काममा आलटाल गर्दा अरुले फाइदा लिने छन् ।
वृश्चिकः– कर्म हिनताको अवस्था आउन सक्छ । घरयासी खर्च वृद्धिले आर्थिक स्थिति कमजोर बन्नेछ । काम गर्ने जोश जागर घट्नेछ । मनमा एक प्रकारको चिन्ताले बास गरि रहनेछ । स्वास्थ्य कमजोर बन्ला । मनले सुख शान्तिको खोजी गर्नेछ । व्यापार व्यवसायमा मन्दि लाग्नेछ ।
धनुः– समयले सामान्य साथ दिनेछ । काम गर्ने वातावरण थोरै बन्नेछ । उद्योग,पराक्रम बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी राम्रो हुनेछ । आफ्नो काम गर्न आफै सक्षम हुनुहुनेछ । काम गरेर अरुबाट प्रशंसा भने पाईने छैन,उल्टो कुरा काट्ने छन् । आर्थिक कारोवारमा भने सचेत रहनुहोला ।
मकरः– दिन मध्यम देखिन्छ । काममा स्थायीत्व दिनु पर्ने देखिन्छ । बोलिको प्रभाव थोरै पर्नेछ । इष्टमित्रबाट सहयोग कम मिल्नेछ । मेहनतपूर्वक गरेका काम सफल हुने छन् । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य लाभ हुनेछ । मनमा भ्रम पालेर नबस्नु होला । जीवन साथीको सहयोग लिएर काम गर्नु होला ।
कुम्भः– शरीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति बढ्नेछ । काममा देखिएका समस्या कम भएर जाने छन् । अनावस्यक खर्चमा कमी आउनेछ । व्यापार व्यवसायमा सुधार आउनेछ । भोज भतेर,सभा सम्मेलनमा भाग लिने अवसर मिल्नेछ । धार्मिक कार्यमा सहभागि हुन पाईनेछ । सहयोगी मन भेटिने छन् ।
मीनः– दिन त्यति अनुकुल देखिदैन । काम गर्ने बातावरण विग्रिनेछ । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ । काम गर्दा विभिन्न खालका समस्या झेल्नु पर्नेछ । अनावस्यक खर्च बढ्नेछ । नगरेका कामको अपयश लिनु पर्नेछ । विश्वासमा धोका हुनसक्छ । नयाँ क्षेत्रमा धन लगानी नबढाउनु होला ।